मानवलाई उर्जाशील बनाई राख्नको लागि दैनिक योग अभ्यास मेडिटेसन आवश्यक ! – ebaglung.com
मानवलाई उर्जाशील बनाई राख्नको लागि दैनिक योग अभ्यास मेडिटेसन आवश्यक !
२०७५ चैत्र १७, आईतवार २१:१४	Top News, थप समाचार
पोखरा,बाटुलेचौर, २०७५ चैत १७ । जनचेतनाको विकास गराउने उद्देश्यले हिमालय क्लब बाटुलेचौर पोखराको आयोजनमा एक दिने सेक्रेट अफ लाईफ विषयक प्रशिक्षण कालिका बहुउद्देश्य भवनको सभा हलमा बाटुलेचौरमा सम्पन्न भयो ।
प्रशिक्षणमा मन्तव्य व्यक्त गर्नु हुदै प्रमुख अतिथि ब्रह्माकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र लामाचौरकी संचालिका ब्रह्माकुमारी विष्ण दिदीले मानवलाई उर्जाशील बनाई राख्नको लागि दैनिक योग अभ्यास मेडिटेसनको अभ्यास गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता भएको बताईन् । आत्मबल शक्तिको अभावमा समाजमा दैनिक विविध प्रकारका विकृति भईरहेका छन । यसको समाधानको बाटो भनेको नै मानवको मनलाई सकारात्म दिशातिर लैजाने खालको शिक्षाको जरुरी भएको उनको भनाई थियो ।
प्रशिक्षणमा स्वस्थ मन,सकारात्मक सोच, मेडिटेसन, परिवर्तनको कला आदि विषयहरुमा प्रशिक्षण दिनु हुदै ब्रह्माकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र दमौलीका प्रशिक्षक ब्रह्माकुमार राजु खड्काले मानव जीवनलाई सार्थक र सफल बनाउनको लागि सदैव असल सपनाहरु,खुशी र विश्वको शक्तिहरु बढाई राख्नको लागि समयको व्यवस्थापन एवं आध्यात्मिक चिन्तन योग अभ्यासलाई दैनिक जीवनमा निरन्तर अपनाउनु पर्ने बताए ।
सो प्रशिक्षणमा हिमालय क्लबका अध्यक्ष मोहन थापा, समाजसेवी उदय गौली, क्लबका सदस्य पुप्षराज अधिकारी लगाएतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
प्रशिक्षणमा वडा न.१६ का अध्यक्ष जीवन प्रसाद शर्मा लगाएत १५७ जनाको प्रशिक्षणमा सहभागिता रहेको थियो ।
बागलुङमा SEE परीक्षा शान्तिपूर्वक सम्पन्न : उत्तरपुस्तिका सुरक्षित तवरले पु-याउन प्रजिअ खरेलको निर्देशन